နီးကပျလာပွီဖွဈတဲ့ ဒုတိယအကွိမျ (ICJ) ရုံးခြိနျးနဲ့ အခေါငျးတဈဖကျ ကငျြးတဈဖကျ ဖွဈတော့မညျ့ စကစ ဘာလုပျမှာလဲ – Cele Lover
ရိုဟငျဂြာလူမြိုးသုဉျး သ တျ ဖွ တျမှုအတှကျ (ICJ) မှာ လာမယျ့ (23.6.2021) မှာ ဒုတိယအကွိမျ လူကိုယျတိုငျ လြှောကျလဲရတော့မညျဟု သိရသညျ….
လကျရှိ မွနျမာပွညျသူတှေ တရားဝငျ တငျမွှောကျထားတဲ့ (NUG) အစိုးရကတော့…..(ICJ) ရဲ့စီရငျမှုကို သှားရောကျနာခံမှာ ဖွဈပွီး…..မအလ,ကတော့ ကမ်ဘာ့အလယျမှာ မွှေ ခွော ကျ ကို ကျခံရနိုငျမညျ့ အခွအေနတှေေ စတငျ တှကွေုံ့ရပွီဖွဈသညျ…..
လကျရှိမှာ မအလ,သညျ (ICJ) မှာ တရားစှဲထားသော ရိုဟငျဂြာ လူမြိုး တု နျး သ တျဖွ တျမှု ပွ ဈ မှုကြူးလှ နျထားတဲ့ စဈတပျရဲ့အကွီးအကဲဖွဈသလို…… လကျရှိလညျး ပွညျသူတှကေို သ တျ ဖွ တျပွနတေဲ့…. စဈတပျခေါငျးဆောငျလညျး ဖွဈနတောမို့…..
နိုငျငံခေါငျးဆောငျ လုပျပွီး (ICJ) ကို သှားရောကျ လိုကျတာနဲ့ ဖမျးဆီးခံရမညျ့ အရေးက ဖိတျချေါစရာတောငျ မလိုပေ…. (လလေ့ာထားမှုအရ “ICJ” မှာ တရားစှပျစှဲခံထားရသူအား ဖမျးဆီးပိုငျခှငျ့ ရှိသညျ)..
မအလ,အနဖွေငျ့ (ICJ) ရဲ့ ဒုတိယအကွိမျ ပွ ဈမှုအတှကျ ချေါယူမှုအား မသှားပဲ (NUG) သာ သှား ရောကျခဲ့မယျဆိုရငျ…… မွနျမာနိုငျငံရဲ့တရားဝငျအစိုးရအဖွဈ နိူငျငံတကာရဲ့ အသိအမှတျပွုမှုအား (NUG) သာလြှငျ ရရှိသှားတော့မညျ…..
နီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် (ICJ) ရုံးချိန်းနဲ့ အခေါင်းတစ်ဖက် ကျင်းတစ်ဖက် ဖြစ်တော့မည့် စကစ ဘာလုပ်မှာလဲ
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသုဉ်း သ တ် ဖြ တ်မှုအတွက် (ICJ) မှာ လာမယ့် (23.6.2021) မှာ ဒုတိယအကြိမ် လူကိုယ်တိုင် လျှောက်လဲရတော့မည်ဟု သိရသည်….
လက်ရှိ မြန်မာပြည်သူတွေ တရားဝင် တင်မြှောက်ထားတဲ့ (NUG) အစိုးရကတော့…..(ICJ) ရဲ့စီရင်မှုကို သွားရောက်နာခံမှာ ဖြစ်ပြီး…..မအလ,ကတော့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြွေ ခြော က် ကို က်ခံရနိုင်မည့် အခြေအနေတွေ စတင် တွေ့ကြုံရပြီဖြစ်သည်…..
လက်ရှိမှာ မအလ,သည် (ICJ) မှာ တရားစွဲထားသော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး တု န်း သ တ်ဖြ တ်မှု ပြ စ် မှုကျူးလွ န်ထားတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သလို…… လက်ရှိလည်း ပြည်သူတွေကို သ တ် ဖြ တ်ပြနေတဲ့…. စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်နေတာမို့…..
နိုင်ငံခေါင်းဆောင် လုပ်ပြီး (ICJ) ကို သွားရောက် လိုက်တာနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရမည့် အရေးက ဖိတ်ခေါ်စရာတောင် မလိုပေ…. (လေ့လာထားမှုအရ “ICJ” မှာ တရားစွပ်စွဲခံထားရသူအား ဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့် ရှိသည်)..
မအလ,အနေဖြင့် (ICJ) ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပြ စ်မှုအတွက် ခေါ်ယူမှုအား မသွားပဲ (NUG) သာ သွား ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်…… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် နိူင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုအား (NUG) သာလျှင် ရရှိသွားတော့မည်…..
Previous Article အမြိုးသမီးတှမှောဖွဈတဲ့မီးယပျသှေးဆုံးကိုငျတဲ့ရောဂါကိုပြောကျကငျးစတေဲ့အိမျတှငျးဆေးနညျး
Next Article ခှဲခွားနသေမြှပွညျသူတှေ ကှဲပွားနဦေးမှာပဲလို့ အကယျဒမီနတေိုး